यी ३ राशिका पुरुष बन्छन् ‘बेस्ट हजबेन्ड’, श्रीमतीको दुख देख्नै सक्दैनन् ! – Ramailo Sandesh
यी ३ राशिका पुरुष बन्छन् ‘बेस्ट हजबेन्ड’, श्रीमतीको दुख देख्नै सक्दैनन् !
आफ्नो लागि उत्तम जीवनसाथी छनौट गर्नु सायद संसारको सबैभन्दा गाह्रो काम होला। विवाहपछि आफ्नो जीवनसाथीसँग राम्रो सम्बन्ध भएन भने हाम्रो जीवन नै बर्बाद भएको पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैले, जीवनसाथी छनौट गर्ने कुरामा कुनै जोखिम लिने सोच्न सक्दैनौं। विशेषगरी महिलाको लागि जीवनसाथी रोज्दा त धेरै कुरा हेर्न आवश्यक हुन्छ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार तीन राशिका पुरुषलाई ‘सर्वश्रेष्ठ पति’ भनिन्छ। बाह्रमध्ये, यी ३ राशिका पुरुषहरू निश्चित रूपले एक आदर्श पति हुन्छन्। जान्नुहोस् यी ३ राशि कुन-कुन हुन् त?
मकर राशिका पतिसँग उनीहरुको पत्नी सधैं सन्तुष्ट रहन्छन् र यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो उनिहरुको स्वभाव। यस राशिका पुरुष सधैं आफ्नो पत्नी प्रति वफादार रहन्छन्। मकर राशिका व्यक्तिको स्वभावले मात्र होईन, उनीहरुको व्यक्तित्वले पनि महिला आकर्षित हुन्छन्। उनीहरुको स्मार्ट लुक, आकर्षक बोल्ने शैली र सकरात्मक व्यवहारले नै उनीहरुलाई उत्तम बनाउँदछ।
यस राशिका मानिस निकै आकर्षक किसिमका हुन्छन्। यिनीहरु एक सफल र उत्तम पति बन्न पनि लायक हुन्छन्। आफ्नो श्रीमतीको ख्याल राख्नु, बच्चाको हेरचाह गर्नु, पत्नीको भावना सम्झनु जस्ता गुणले सिंह राशिका मानिस उत्तम श्रीमान बन्न सफल हुन्छन्।
कन्या राशिका पुरुषहरू सबैभन्दा असल पति बन्छन् र यदि तपाईंको श्रीमानको राशि कन्या हो भने तपाईं भाग्यशाली महिला हुनुहुन्छ। कन्या राशिका पुरुष आफ्नी श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छन र आफ्नो श्रीमतीलाई कुनै समस्या भएको देख्न सक्दैनन्। श्रीमतीको हरेक कदममा साथ दिने यस राशिका श्रीमान एक असल र उत्तम श्रीमान बन्न सफल हुन्छन्।
दुई संतानकी आमा भइ सक्दा पनि यस्तो ख’राब बानी कैलै पनि हटाइनिन् अभिनेत्री करिनाले
संकटमा भारतलाई धनाढ्यको ठूला सहयोग, नि:शुल्क उपचार गर्नेगरी अम्बानीबाट १००० बेडको अस्पताल